Ihowuliseyili yelanga yeqwarhashe yelinen abavelisi kunye nababoneleli - China Iscreen seZebra Ilaphu lendwangu
Umbane oMhlophe oMacala oMabini oMbane oLuhlaza oLuhlaza oLuhlaza oMnyama oMnyama
Ilaphu leZebra linokucuthwa kabini, linokuhlengahlengisa ukukhanya kwendawo kwaye alihlali ndawo. Umbala ugcwele kwaye umsulwa, umbala weempahla ezikumgangatho ophezulu ziqhamo kwaye ziyathandeka, ngombala wokukhawuleza kombala kwaye unqabile kwi-Sun, akukho lula ukuphela.
Ngokusetyenziswa ngokubanzi kwamalaphu omthunzi, abantu baneemfuno ezahlukeneyo ezizezakho zomthunzi amalaphu e-PVC, phakathi kwawo amakhethini omnyama alaphu elinomsebenzi ongangeni manzi nawo athandwayo.
Umgangatho ophezulu oXabiso liXabiso loMlilo oLindayo weZebra Blinds
Imisebenzi yeqwarhashe iyaluvala ilaphu
Amalaphu omkhusane weZebra ubukhulu becala ipholiyesta, ihempe kunye nenayiloni. Ngokweziphumo ezahlukileyo zokufotwa kwamalaphu, zinokwahlulwahlulwa zibe ngamakhethini eqwarhashe anemithunzi, amalaphu e-zebra anjengelinen kunye namakhethini e-zebra apheleleyo. Iziphumo zokufiphaza ukusuka ezantsi ukuya phezulu.
Ehlotyeni, imitha yelanga ethe ngqo ingena kwigumbi ngeglasi iya kubangela iqondo lobushushu kwimitha eqinileyo kumphezulu wegumbi elikufutshane nefestile ukunyuka ngokubonakalayo, ukunika abantu imvakalelo yokubhaka.
Ebusika, ifestile yeglasi enobushushu bomhlaba obusezantsi kakhulu inika imitha yokubanda. Kwangelo xesha, ukubanda komoya obandayo okubangelwa kukuzika komoya obandayo kufutshane nefestile kuzisa imvakalelo yomoya obandayo ovuthuzayo kubantu abakufutshane nefestile, okunciphisa kakhulu ukonwaba kwabantu.
Xa sifika kwindawo engaqhelekanga, into yokuqala esitsalayo kukuhombisa. Ukuhonjiswa okuhle kunokusinika imvakalelo entsha. Iphepha lodonga olwahlukileyo, kunye nokukhethwa okuhle kwamakhethini, kuhlala kunokuzisa incasa eyahlukileyo ebomini. Namhlanje, siza kwazisa umgaqo osisiseko wokufanisa iphepha lodonga kunye namakhethini kuwe xa sikhetha ikhethini. Masilungiselele isimangaliso sephupha elimangalisayo ngobomi bethu.
Ilaphu leqwarhashe lesikrini esine-sunscreen kwimpilo yabantu kunye nendawo abahlala kuyo, ukuphucula ubungakanani bokukhanya ngaphakathi kunye nokuthuthuzela kwendalo yangaphakathi, eli laphu lomthunzi lenza ukukhanya okungena kwigumbi kube nokuthamba kwaye kukhululeke, kwaye kukwenze incasa yendalo, yongeza ubuhle yendawo engaphakathi, kwaye yenza abantu baphumle, amalaphu aphindwe kabini anokulungisa ukukhanya. Xa iimfama zivuliwe, siyakonwabela ubuhle bendalo bangaphandle. Xa iimfama zivaliwe, ikude ngokupheleleyo ngaphandle, qinisekisa ukuba ngasese.
Xa i-gauze kunye ne-gauze ihamba, ukukhanya kuthambile, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ukunciphisa ukukhanya ngokuthe ngqo. Xa ilaphu kunye nelaphu limile, ukukhanya kuvaliwe ngokupheleleyo, ukuze ekugqibeleni kufezekiswe injongo yokuthintela ukukhanya. Xa iimfama zifuna ukuvulwa ngokupheleleyo, iimfama zinokugqitywa ngokupheleleyo. I-zebra blind idibanisa ubushushu belaphu, ukuhombisa kwe-blind blind, kunye nomsebenzi omfiliba weemfama. Kulula ukusebenza kwaye ineentlobo ezahlukeneyo ze-shading ngaphandle kokuthintela intsimi yombono. Olu khetho lulungele iofisi kunye nokuhonjiswa kwefestile ekhaya.
IGREENGUARD ikakhulu yazisa ngemigangatho yomoya esemgangathweni ongaphakathi, ukubonelela ngovavanyo lomntu wesithathu kukhuseleko olusezantsi lweemveliso zeekhemikhali. Inika iimveliso ezinempilo ngakumbi kwaye iphucula imeko engaphakathi. Yimigangatho ekubhekiswa kuyo kunye nomxholo webhonasi yenkqubo ye-LEED yoLwakhiwo loGayo. IGREENGUARD Environmental Institute, njengeziko elivunyiweyo neligunyazisiweyo lokusekwa liZiko leMigangatho yeSizwe laseMelika (i-ANSI) esekwe umgangatho ongqongqo wemveliso kuzo zonke iimveliso zangaphakathi, kubandakanya izinto zokwakha, izinto zokuhombisa, ifanitshala, izinto zomgangatho, izinto zomhlaba, iipeyinti kunye nezinto zokwaleka. , iiarhente zokucoca kunye nezinye iimveliso zabantwana kwiindidi ezingaphezu kwama-20.